အောင်မော်ဦး - War on Wuhan - MoeMaKa Media
Home / Article / Aung Maw Oo / Coronavirus / Currents / Features / အောင်မော်ဦး - War on Wuhan
အောင်မော်ဦး - War on Wuhan
Article, Aung Maw Oo, Coronavirus, Currents, Features
War on Wuhan
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားအခြေစိုက် Smithfield Farms လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်ပိုင် ဝက်သားစက်ရုံကြီး (Meat Plant) ကနေ တနှစ်ကို ဝက်သားပေါင်ချိန် ၆ ဘီလျံကျော်ထုတ်လုပ်နေပြီးတော့ အများစုက တရုတ်နိုင်ငံကို တင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Smithfield Farms မှာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ငါးသောင်းလေးထောင်ကျော် (၅၄၀၀၀) ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့နေတဲ့ မင်နီဆိုတာပြည်နယ်နဲ့ တောင်ပိုင်း ဒါကိုတာပြည်နယ်တို့မှာတော့ ကရင်မိသားစုတွေ အများအပြားနေထိုင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တတွေက Meat Plants လို့ခေါ်တဲ့ အသားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိုင်အိုဝါ၊ ကင်တာကီ၊ ကော်လိုရာဒို၊ တက္ကဆက် စသဖြင့်မှာလည်း မြန်မာတွေလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။
အဲဒီ အသားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကြီးတွေမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လို့ ပိတ်ပစ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်ကြရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နီပေါထရမ့်က အဲဒီစက်ရုံတွေကို ခုချက်ချင်းပြန်ဖွင့်၊ အကုန်လုံး အလုပ်ပြန်ဆင်းဆိုပြီး လူတွေကို စက်ရုံထဲမောင်းသွင်းနေပါတယ်။ (ထရမ့်ကို နီပေါလို့ခေါ်တာက သူ့ ရီပတ်ပလီကင်ပါတီက အနီရောင်သငေ်္ကတ (သင်ကေတ)ဖြစ်တာမို့ပါ။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာကျော်အောင်လည်း ပေါတာကြောင့်မို့ပါ)
အခုလိုအတင်းပြန်ဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်တဦးက ဒီလိုပြောပါတယ်။ မဖြစ်မနေ အလုပ်ဆင်းကြရမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေက အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမားဥပဒေ အစရှိတာတွေနဲ့ လုပ်စရာရှိတာလုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မလုံလောက်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း လူ့အသက် တွေ အလဟသမသေစေရေးအတွက် ဝိုင်းလုပ်ပေးကြရပါမယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် အဲဒီအသား ရုံတွေထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရင် စာရင်းပြုစုထားကြပါတဲ့။ (ရဲဘော်မောင်ဦးနဲ့ ရဲဘော်မြင့်စိုးနိုင်တို့က ကူညီပေးလို့ ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်နဲ့ ကင်တာကီပြည်နယ်က မိသားစုတချို့ကို စာရင်းပြုစုထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်)။
မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်က အချက်(၄)ချက်ပြောပါတယ်။
(၁) လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးအတွက် အလုပ်သမားတိုင်း PPE ဝတ်စုံတွေ ဝတ်ခွင့်ရဖို့။
(၂) Hazard Pay လို့ခေါ်တဲ့ အထူးလုပ်အားခ (အန္တရာယ်ရှိတဲ့အလုပ်မျိုးကို လုပ်နေကြရတဲ့ မရှိမဖြစ်လုပ်သားများ ခံစားခွင့်) ရရှိဖို့။
(၃) ကိုဗစ်ရှိ/မရှိ ဆေးစစ်ခွင့်ရရှိဖို့။
(၄) ငါတို့ဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်၊ ဘယ်သူတွေအတွက် ငါတို့အလုပ်လုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတာကို လူအများသိမြင်နားလည်စေဖို့။
အသားရုံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့သူတို့လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟာ လက်ရှိကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ (ဥပမာ-၆ ပေအကွာ၊ မတ်၊ လက်အိတ်၊ ဝတ်စုံ စသဖြင့်) ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ။ ပြီးတော့ ရောဂါပိုးကူးခံရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း သူတို့ကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ကူးစက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်၊ ပြီးတော့ သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်သူတွေက သူတို့လုံခြုံရေးအတွက် ဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးတယ် စသဖြင့်ကို ဝန်ထမ်းတဦးချင်းစီက စနစ်တကျမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ ပြုစုထားကြဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ မှတ်တမ်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ အင်စပက်တာတွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးစေတာ၊ မီဒီယာတွေကို သွားရောက်သတင်းယူစေတာ စသဖြင့် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ နံပါတ်(၄)အချက်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ငါတို့ဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ ကျနော်တို့ဟာ နီပေါထရမ့် အပြစ်ဖို့နေတဲ့ refugees တွေပါ။ အဲဒီ refugees တွေက လူအားလုံးစားဖို့နဲ့၊ ပြည်ပကိုတင်ပို့ဖို့ လိုအပ်တဲ့အစားအစာတွေကို အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတာပါ။ ငါတို့ဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ အရေးကြုံလာတဲ့အခါ မဆိုင်သလိုမနေဘဲ အတူတကွရင်ဆိုင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ဒီအချက်က အမျိုးသားရေးဇောင်းပေးချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ နီပေါထရမ့်ကို ထောက်ခံသူတွေရော၊ မထောက်ခံသူတွေပါ သိရှိနားလည်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ စပါးကျီကြီးတွေထဲက တခုအပါအဝင်လို့ ဆိုရမယ့် ဒီအသားစက်ရုံကြီးတွေရပ်သွားရင် လူသန်းပေါင်းများစွာ ဒုက္ခရောက်ကြမှာပါ။
နီပေါထရမ့်ကြီးက ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာတွေအကုန်လုံးပိတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ဒုသမတမိုက်ပင့်စ် Mask မတပ်ဘဲ ဆေးရုံသွားလည်တဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကို ပြေးမြင်မိပါတယ်။ သူတို့အကွက်ကိုလည်း ရေးရေးနားလည်မိပါတယ်။ နီပေါထရမ့်က သွားကြ၊ အကုန်လုံးအလုပ်ဆင်းကြဆိုပြီး နွားမောင်းသလိုမောင်းသွင်းပါတယ်။
ဒါကို မြင်းမြီးဆွဲမိုက်ပင့်စ်က Mask မတပ်ဘဲ အလုပ်ဆင်းရတဲ့ကိစ္စလောက်ကို လာမပြောနဲ့ ငါတောင် လူနာရှိတဲ့ ဆေးရုံကို မတ်မတပ်ဘဲ သွားခဲ့သေးတယ်ကွဆိုပြီး သူထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကို သူကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်ပြလိုက်တာပါ။ ဒေါက်တာဖောက်ချီအပါအဝင် ဆေးပညာရှင်တွေကို နားရွက်တံတွေးဆွတ်လိုက်ကြတာပါပဲ။ (ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါက်တာဖောက်ချီဟာ မေလ၊ ၁၂ ရက်နေ့မှာ လွှတ်တော်မှာ သွားရောက်အစီရင်ခံမယ်လို့ သိရပါတယ်)
War on Terror ဆိုပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ (သူတို့အပြောအရ) ဒီမိုကရေစီထူထောင်ဖို့ အမေရိကန်စစ်သားတွေစေလွှတ်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ သောက်သောက်လဲ သေပျောက်ခဲ့ကြတာကိုလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ခုတခါ နီပေါထရမ့် အစိုးရက War on Wuhan ဆိုပြီး America Great Again လုပ်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေပါပြီ။ ငွေသာရမယ်ဆိုလို့ကတော့ သေခါမှသေရော ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းပါ။
ဆိုတော့ကာ ဒီ War on Wuhan မှာ လုပ်သားတွေကို စစ်သားတွေလို အသေခံပြီး တက်တိုက်ခိုင်းမယ့် နီပေါထရမ့်ရဲ့ပေါ်လစီဟာ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး " FREEDOM " လို့တောင်းဆိုနေတဲ့ သူ့တပည့် “နီပိန်း”တွေကြောင့် ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ရင် ရှုံးနိုင်ချေရှိပါတယ်။ ငနဲသားနီပေါထရမ့်က တပ်ရင်းတရင်းကျရင် နောက်ထပ် တပ်ရင်းတရင်းထပ်တက် ဆိုတာမျိုး လုပ်နေတာပါ။ ဒီလိုလုပ်နိုင်အောင်လည်း သူ့မှာ ဒီနေ့ဗီဇာပေးလိုက်ရင် နောက်နေ့ရောက်ချလာမယ့် အိမ်နီးချင်းမက္ကစီကိုနိုင်ငံအပါအဝင် တောင်အမေရိကတိုက်ကြီး တတိုက်လုံး ရှိနေတာကြောင့်ပါ။
JBS ဆိုတဲ့ အသားရုံကြီးကတော့ မေလ(၆)ရက်နေ့မှာ ပြန်ဖွင့်ပါတော့မယ်။ အဲဒီလို ပြန်ဖွင့်မယ့် အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး UFCW လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကြေညာချက်ကို အကျဉ်းချုပ်ဘာသာပြန်ရရင် ထရမ့်ကြီးဇွတ်ခိုင်းလို့ဖွင့်ရတာပါတဲ့။ အဲဒီလင့်မှာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ လုပ်ဆောင်ထားတာတွေကို ဒေါင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလိုတွေ လုပ်ပေးထားပေမယ့်လည်း ခင်ဗျားကို မကူးစက်ဘူးလို့တော့ အာမ မခံနိုင်ပါဘူးတဲ့။
As you are aware, the President of the United States signed an executive order that forces JBS and other meatpacking facilities to reopen around the country during this COVID-19 pandemic. JBS plans to reopen the kill side of the plant this Wednesday, May 6. You can view the list of safety measures JBS has implemented below or download it here.
While all of these improved efforts are to keep you safe and reduce the risk of infection of COVID-19, they are notaguarantee that you will not become sick.
ကိုဗစ်ဟာ မမြင်ရတဲ့ရန်သူလို့ ဆိုကြပါတယ်။ အသက်ပေးကျောင်းရမယ့် စားကျက်မြေ (Amerian Dream) ကြီးကရော ကျနော်တို့အတွက် Sweet Dream ဖြစ်ပါရဲ့လား။ ရွေးချယ်ခွင့်နည်းပါးလှတဲ့ ကျနော်တို့အနာဂတ်ကရော လင်းလင်းချင်းချင်းရှိပါရဲ့လား။
မေ၊ ၅၊ ၂၀၂၀။
အောင်မော်ဦး - War on Wuhan Reviewed by k on 3:13 AM Rating: 5